Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Sabti, 29 Dec.
Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Sabti, 29 Dec.
December 29th, 2007 Comments Off “Waxa Jiray rabshado iyo qalalaasayaal weeraro xambaarsanaa”
Warbixin hordhaca ah oo Goobjoogayaashu Caalamiga ah ee S/land ka midtahay ka soo saareen doorashada Kenya
Nairobi (W. Wararka/Ogaal)- Machadka Jamhuuriga Caalamiga (International Republican Institute), ee fadhigiisu yahay magaalada Washington DC, ayaa war-saxaafadeed uu ka soo saaray doorashooyinka ka dhacay dalka Kenya, qiimayn ay ku sameeyeen ku sheegay in dimuquraaddiyadda dalkaas ay muhiim u tahay doorashooyinku. isla markaana waxay dadka reer Kenya ku amaaneen nabadgelyada ay ugu dareereen goobaha cod-bixinta.
Machadka IRI, oo goob-joogayaal caalami ah isugu keenay doorashooyinka madaxtinimo, baarlamaan iyo dawladdaha hoose, ayaa war-saxaafadeedkooddan ku sheegay in hanaanka dimuquraadiyadeed aanu ahayn oo keliya cod-bixinta, balse loo baahan yahay in si dhamaystiran loo buuxiyo shuruudaha dimuquraadiyadeed. war-saxaafadeedkoodan, oo ay ku xuseen goob-joogayaasha caalamiga ah inay ka mid yihiin wufuud reer Somaliland ah, oo aad u dheeraa isaga oo aanu soo koobnay waxa uu u dhignaa sidan: “Dadka reer Kenya way u han-waynaan karaan hanaanka ay u qabatimeen qawaaniinta aasaasiga ah ee dimuquraadiyadda, marka loo eego doorashooyinkan muhiimka ah. Goobihii cod-bixinta ee ay goob-jooga ka ahaayeen Kooxaha Machadka IRI, hanaanka ay wax u socdeen, waxa uu u muuqday mid furan, axsaabta siyaasadda wakiillada ka socda, goob-joogayaasha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahiba waxay helayeen fursadda ay ku indha-indheeyaan qaabka ay doorashadu ku furantay. Hase yeeshee, sida ka dhacda doorashooyin fara badan oo caalamka oo dhan ah, Guddiga Doorashooyinka Kenya (ECK) waxay ahayd may iclaaminin furitaanka goobaha cod-bixinta xilli hore.”
Machadka IRI, waxa ay sheegeen in mudadii lixda bilood ahayd ee ay ololayaasha doorashooyinku socdeen wacyigelin badan la sameeyay, si ka qaybgalka codaynta dadweynuhu u badato. Waxaanay intaa ku dareen inay jireen rabshado iyo qalalaasayaal weeraro xambaarsanaa, kuwaas oo loo geystay murashaxiin iyo dadka abaabulka qaabilsan, iyo xad-gudubyo loo geystay haween badan, isla markaana waxa uu machadku war-saxaafadeedkiisan ku xusay in ay jireen isku-dhacyo ay iskaga horyimaadeen kooxo iska soo horjeeda oo ay dhiirigelinayeen dareemo kacsan oo siyaasadeed. “Dhacdooyinka sidan ah iyo rabshaddahaasi waxay khaasatan nasiib-darro ku yihiin dimuquraadiyadda Kenya, taasoo sababi karta xataa isku-buuq dhaca maalinta doorashada,” ayaa ka mid ahaa qoraalka war-saxaafadeedka. “Iyada oo dalka Kenya uu hore ugu tallaabsanayo dhinaca dimuquraadiyadda iyo doorashooyinkii xorta ahaa, ayaa Machadka IRI, waxa ay wufuuda ka socotaa ku dhiirigelinayaan dadku inay sii wadaan ixtiraamka ay u hayaan hanaanka dimuquraadiyadeed, iyo inay aqbalaan natiijada go’aanka kama dambaysta ah ee doorashooyinka.”
Goob-joogayaasha IRI, waxay dusha ka ilaalinayeen inka badan 100 goobood oo ku baahsanaa guud ahaanba sideeda goobol ee uu dalka Kenya ka kooban yahay. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedkana, waxa goob-joogayaasha Machadka Jamhuuriga Caalamiga ah ka socday hogaaminayay Constance Berry Newman, oo xubin ka ah Guddiga maamulka Machadka IRI, horena u ahaa Xoghayaha Arrimaha Dibadda u qaabilsanaa arrimaha Afrikaanka. Wufuuda kalena, waxa war-saxaafadeedka lagu sheegay inay kala yihiin; Xuseen Axmed Caydiid, oo xubin ka ah Guddiga Fulinta Xisbiga Somaliland ee Midnimada iyo Horumarka (KULMIYE), isla markaana xubin ka ah guddiga diiwaan-gelinta qaranka; Joel Barkan, oo barafasoor Cilmiga Siyaasadda iyo Sayniska ka ah Jaamacadda Iowa; Cumar Jaamac Faarax, oo xubin ka ah Guddiga Fulinta Xisbiga talada haya ee UDUB, isla markaana xubin ka ah guddiga diiwaan-gelinta qaranka Somaliland; Irena Hadziabdic, oo xubin ka ah Komishanka Doorashooyinka Bosnia iyo Herzegovina; Maureen Harrington, oo hore u ahayd madaxa barnaamijka Machadka IRI ee Koonfur Afrika; Cabdillaahi Siciid Ismaaciil, oo xubin ka ah Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka Somaliland (UCID), isla markaana xubin ka ah Guddiga Diiwaan-gelinta Somaliland; Anne Itto, Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaybta Koonfureed ee Xisbiga Suuddaan ee SPLM; Simon Kun, oo xubin ka ah Xafiiska Siyaasadda Qaranka ku-meelgaadhka ah, isla markaana ah madaxa Komishanka Gargaarka Bani’aadaminimo ee Koonfurta Suuddaan; Sylvestre Somo Mwaka, U adeege xuquuqda aadamaha ah, isla markaana caawiye u ah madaxweynaha guddiga madaxabanaan ee doorashooyinka ee xaruntiisu tahay magaalada Kinshasa, ee dalka Jamhuuriyadda Dimuquraadiga Koongo; Ronald Nehring, oo ah guddoomiyaha Xisbiga Jamhuuriga ah ee Gobolka California; Ambaassadoor Lange Schermerhorn, oo hore Maraykanka ugu joogay dalka Djibouti; Iyo Bushara Hussan El Tali, ku-xigeenka xoghayaha tabobarrada iyo balaadhinta dhismaha awoodeed ee Ururka Dhaqdhaqaaqa Xorraynta Suuddaan.
Machadka IRI oo sheegay inay dalka Kenya kala shaqeeyaan isbedellada siyaasadeed, iyo sidii loo horemarin lahaa ajandayaasha ololayaasha lagaga hadlayo arrimaha khuseeya codeeyeyaasha, ayaa tan iyo sannadkii 1983-kii goob-joognimo uga soo qaybgalay doorashooyin ka dhacayay inka badan 130 waddan.
M/Weyne ku xigeenka oo dhagaxdhigay Dhismayaal lagu kordhinayo Jaamacadda Hargeysa
Hargeysa(Ogaal) – Madaxweyne ku xigeenka Somaliland md, Axmed Yuusuf Yaasiin ayaa Khamiistii doraad dhagax dhigay dhisme cusub oo lagu darayo jaamacada Hargaysa oo ay maalgaliyeen Baanka Islaamku.
Dhismayaashan lagu kordhinayo jaamacada Hargaysa waxa ku baxaya lacag gaadhaysa $450,000(Afar boqol iyo konton kun oo doolar). waxaanu dhismahaasi qaadanayaa muddo toban ilaa sideed bilood ah,
Sida ay sheegeen maamulka Jaamacada Hargeysa lacagta loogu talagalay hawshan waxa loo qaybiyay laba boqol iyo shan iyo konton kun oo Dollar oo dhismaha lagu hirgalin doono iyo boqol iyo shan iyo sagaashan kun oo lagu qalabayn doono.
Munaasibad balaadhan oo loo sameeyay bilowga dhismayaashani ayaa waxa dhagaxdhigay Khamiistii Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland, Mudane Axmed Yuusuf Yaasiin, hadal kooban oo uu halkaa ka jeediyayna waxa uu ugu mahadceliyay Baanka Aduunka oo mashruucan ugu deeqay Jaamacadda Hargeysa. Iyadoo hawshan dhiraandhirinteedana ay dedaal-badan u galeen maamulka Jaamacadu.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland waxa uu xusay in ardaydan wakhtigani ay ka nasiib badan tahay ardaydii hore, isaga oo tibaaxay in dhismaha Jaamacadan ee hore bilowgii qorshuhu ahaa in jaamacad loogu talagalay ayuu yidhi, hadana qorshihii laga bedelay oo dugsi sare laga dhigay.
Waxa uu madaxweyne ku xigeenka Somaliland ka codsaday Maamulka iyo ardayda jaamacaduba inay ka faa’iideystaan dhismaha iyo qalabka loo dhigi doonaba. Isaga oo sidoo kalena ku guubaabiyay inay dedaalka dhinaca Tignolajiga casriga ah iyo culuunta Sayniska ku dedaalaan maadaama maanta tartanka ugu badan arrimahaasi dunidu ugu jirto.
Dhismaha cusub ee jaamacada lagu kordhinayo waxa hirgalinaysa shirkad wadani ah oo lagu magacaabo Axad Construction Company.
Taasoo ku guulaysatay tartan loo galay dhismaha dhismayaasha cusub ee Jaamacadda lagu kordhinayo.
Qalaalaasaha iyo Weerarada qorshaysan ee caasimadii dhiiga
Muqdisho (W. Wararka/Ogaal)- Weerar gaadmo ah oo lagu qaaday Ciidamada Maamulka Mbeghati ee Somalia, ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba qof, meel duleedka ka ah Magaalada Muqdisho.
Siday sheegeen dad goob-joogaayaal ahi,